Amin'izao fotoana izao, eo amin'ny sehatry ny fonosana eo amin'ny tsena anatiny, ny akora famonosana fitaovana isan-karazany, indrindra ny plastika (firafitra: résin synthetic, plasticizer, stabilizer, loko) fonosana tavoahangy, mitana ny antsasaky ny tsena ambany amin'ny indostrian'ny zava-pisotro. Jiangshan, m ...
Ny tavoahangy fitaratra dia ampiasaina amin'ny fonosana vokatra amin'ny indostrian'ny sakafo, divay, zava-pisotro, fanafody ary indostria hafa. Ireo tavoahangy fitaratra sy kapoaka dia manana fitoniana simika tsara ary tsy mifindra ao anatiny. Azo antoka ny fampiasana azy ireo noho ny fahateren'ny rivotra sy ny avo ...
2020-2025 fironana fitomboana sy ny toetran'ny tsenan'ny tavoahangy fitaratra
Ny tavoahangy fitaratra sy kaontenera fitaratra dia ampiasaina amin'ny indostrian'ny zava-pisotro misy alikaola sy tsy misy alikaola, izay afaka mitazona ny tsy fahampian'ny simika, ny tsy fetezana ary ny tsy fahaizan'ny olona. Ny sandan'ny tsenan'ny tavoahangy fitaratra sy kaontenera fitaratra amin'ny taona 2019 dia US $ 60.91 miliara ary antenaina hahatratra $ 77.25 miliara ...